विदेशी फिल्मलाई पाखा लगाउने कहिले ? - Filmyfanda : Always Exclusive Entertainment News Portal SiteFilmyFanda
विदेशी फिल्मलाई पाखा लगाउने कहिले ?
फिल्मी फण्डा । नेपाली फिल्म हलमा नहुँदा अधिकांश सिङ्गल थिएटर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको रिपोर्ट प्राप्त भयो । विगतमा केही फिल्महरुबाट नाफा आर्जन गरेको नाफाले तत्कालको खर्च व्यवस्थापन गरेको र प्रतीक्षित फिल्मको प्रतिक्षामा हलहरु रहेको हल सञ्चालकले बताएका थिए ।
त्यसो त सिङ्गल थिएटर विस्तारै प्रतिस्थापन हुँदै गइरहेका छन् । नयाँ नयाँ मल्टिप्लेक्स हलहरु थपिदैँ छन् । फिल्मको बक्स अफिस कारोबार त परको कुरा करिब २ महिना हलहरुमा नेपाली फिल्म नै छैनन् । मंसिर २० मा रिलिज भएका ‘माछा माछा’ र ‘माया पिरिम’ पछि माघ १७ मा ‘दि कर्मा’ रिलिज हुँदैछन् एकैचोटी।
पुष–माघ महिनामा फिल्मको चाप कम हुनु स्वभाविकै रहेको जानकार बताउँछन् । तर, फिल्म नै नहुनु चाँही अचम्म रहेको उनीहरुको मत छ । विदेशी फिल्मको लागि मेकर डराएर मैदान खाली राख्नु नेपाली रजतपटको नौलो समस्या होइन । तर, फिल्म नै हलमा नभए पछि विदेशी फिल्म हेर्दै दर्शकले चित्त बुझाइरहेका छन् ।
स्तरीय विदेशी फिल्म सहज रुपमा हेरिरहेका दर्शकलाई कम स्तरको नेपाली फिल्म हेर्न मन नलाग्ने फिल्मकर्मीहरु स्वीकार गर्छन् । नेपाली फिल्मको स्तरोन्नती पनि भइरहेको र यो काम निरन्तर चलिरहेन मेकरहरु बताउँछन् ।
घरेलु बजारमा विदेशी फिल्मको बोलवाला रहेको कारणले फिल्मकर्मीले विदेशी फिल्मलाई कोटा प्रणालीमार्फत प्रदर्शन गरिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । नेपालमा विदेशी फिल्म ‘स्वतन्त्र व्यापार’ का नाममा नेपाली फिल्म जसरी नै प्रदर्शन हुँदै आइरहेको छ । ‘स्वतन्त्र व्यापार’ का नाममा जुनसुकै दिन रिलिज हुने परिपाटीको अन्त्य उन्मुख रहेको छ । नेपाली र विदेशी फिल्म शुक्रबारमात्र रिलिज हुँदैछन् ।
हलवाला या वितरकले विदेशी फिल्मलाई मंहगोमा ‘राइटस्’ खरिद गरेर नेपाल भित्र्याउने गर्छन् । आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्दै मुनाफा आर्जन गर्न ती फिल्मलाई घरेलु फिल्मलाई भन्दा बढी महत्त्व दिन्छन् । नेपाली फिल्मले बक्स अफिसमा ‘रेड सिग्नल’ देखाइरहको अवस्थामा विदेशी फिल्मले हल सञ्चालकलाई राहत दिने काम भने गरेको छ ।
नेपालमा विदेशी फिलमको क्रेजले पनि हुनसक्छ मल्टिप्लेक्स हलको संख्या बढ्दै गएको । फिल्मकर्मीले नेपाली फिल्मको विकासका लागि भन्दै विदेशी फिल्मलाई कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवाज उठाए पनि राज्य भने कस्ता फिल्मलाई प्राथमिकतामा राख्ने, कस्ता फिल्म निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्ने भन्ने कुरामा गृहकार्यमा रोकिएको छ ।
उता, विदेशी फिल्मको हकमा कस्तो नियम बनाउने जस्ता विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनको खाँचो रहेको छ । नीतिमा आवश्यक परिमार्जन र व्यवस्था सहित राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७६ संसदीय प्रक्रियामा रहेको छ ।
यादव खरेल संयोजकत्वको चलचित्र नीति मस्यौदा समितिमा विदेशी फिल्मलाई सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरि कोटा प्रणालीबाट नियमन गर्न सकिने उक्त नीतिमा उल्लेख छ । ‘विदेशी फिल्मलाई सकारात्मक विभेद गरेर हाम्रा फिल्मलाई रक्षा गर्न सक्छौं ।
सकारात्मक विभेदमा कोटा प्रणाली पनि हुन सक्छ,’ तत्कालिन चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष स्व. केशव भट्टराईले भनेका थिए । उनको देहावसान पछि बोर्डको बागडोर सम्हाल्न आइपुग्ने अध्यक्षले सो कार्य तत्काल अघि बढाउनु पर्नेछ ।
नेपाली फिल्मको हलमा उपस्थिति नै रहेन भने सकरात्मक विभेदको औचित्य नै रहँदैन । स्वदेशी र विदेशी फिल्मको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र भद्रगोल रिलिज क्यालेण्डर व्यवस्थित पार्नको लागि सरकारात्मक विभेद प्रभावकारी हुन सक्छ । सकरात्मक विभेद चेपुवामा पर्ने स्वदेशी फिल्मको लागि सुरक्षा कवच सावित हुन सक्छ ।
विदेशी फिल्मको लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाई स्वदेशी फिल्मको वर्गीकरण गरि रिलिज क्यालेण्डर व्यवस्थित बनाउनु पर्छ । स्वदेशी फिल्म नै छैनन् भने विदेशी फिल्मलाई कोटा प्रणाली र सकरात्मक विभेद आवश्यक छैन ।
हलमा फिल्म हेर्न पुग्ने दर्शकलाई के देखाउने रु नेपाली रजतपटलाई सँधै पुष महिना नलागिरहनको लागि रिलिज क्यालेण्डर व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । बाह्रै महिना हलमा नेपाली फिल्म देखाइरहन आवश्यक छ अनि गरौँला सकरात्मक विभेद र विदेशी फिल्मलाई कोटा प्रणालीका कुरा ।